ပေါင်းပင်ထိန်းချုပ်မှု - သောအိမ်တွင်းရင်ဆိုင်ခဲ့တယျ။ လူတိုင်းမိမိတို့၏အနည်းငယ်ဧကပေါင်းပင်ရန်လွယ်ကူသည်မဟုတ်သိတယ်။ ဒါကွောငျ့ကပုံမှန်နွေရာသီဧည့်သည်ပေါင်းပင်ထိန်းချုပ်မှုဦးဆောင်, အခြားကုတင်မှတဦးတည်းအနေဖြင့်ရွေ့လျားသည်, မိမိဥယျာဉ်၌ရှိသမျှသောလေးပေါ်ကြောင်းဘာမျှမခံစားခဲ့ရခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကား, ရုန်းကန်၏အကျိုးဆက်အဖြစ်နာကျင်မှု, သူ့ dacha အတွက်နွေဦးနဲ့နွေရာသီသုံးဖြုန်းသူကလူများ၏အများစု၏အဓိကအမာခံများဖြစ်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်, သငျသညျဥယျာဉ်တော်၌ခွင့်အချိန်, စွမ်းအင်နှင့်ကျန်းမာရေးအပေါ်သွားကြဖို့ဆက်လက်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးတော့အန္တရာယ်ရှိသောအပင်ဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲအနိုင်ရနှင့်သိသိသာသာထုတ်လုပ်မှုတိုးမြှင့်ဖို့လိုသူတို့အဘို့, ထွက်တစ်လမ်းတစ် mulch အဖြစ်ရှိနေပါသည်။
မြေဆီလွှာ mulch မှအဘယ်ကြောင့်နည်း
Mulching - ဤအမှုသည်ငါ့အိမ်နောက်ဖေးနှင့်ဥယျာဉ်၌ပေါင်းပင်ဖယ်ရှားပစ်ရအရှိဆုံးရိုးရှင်းပြီးထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ mulch ၏ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများထိုအခါမှတဆင့်ပေါက်လျှင်တစ်ခုတည်းပမာဏ, နှစ်စဉ်ပေါင်းပင်၏တိုးတက်မှုနှင့်နှစ်ရှည်ဖိနှိပ်, သူတို့ဖယ်ရှားပစ်ဖို့ရကူညီပေးသည်ခက်ခဲလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ လွယ်ကူပြီးအားလုံး mulching နည်းပညာသုံးစွဲနိုင်ပိုးမွှားများနှင့်ရောဂါများမှမိမိတို့သီးနှံများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့သင်ကူညီအဖြစ်မြေဆီလွှာ၏ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံသိသိသာသာတိုးတက်ကောင်းမွန်လာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမှဦးဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ Humus အကြောင်းအရာတဖြည်းဖြည်းအလှည့်၌, ညိုညစ်ရောင်၏လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်ရာ, တိုးမြှင့်။ ရလဒ်, မြေဆီလွှာလျော့ရဲ, သင့်ဥယျာဉ်၌စက်ရုံတိုးတက်မှုနှင့်ကလေးမွေးဖွားမှုအတွက်ကျေးဇူးအလျှင်းမပြုဘဲအခြေအနေများ၏ဖန်တီးမှုမှဦးဆောင်အဖြစ်။
ချမ်းရာသီအဖြစ်, သစ်ပင် mulch အပူကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်စေရန်ကူညီပေးသည်နှင့်အသီးများနှင့်အခြားနှစ်ရှည်သီးနှံများ၏စိုက်ပျိုးမြေများအတွက်အရေးကြီးပါသည်။ သငျသညျဟင်းသီးဟင်းရွက်များကြီးထွားနေလျှင် - mulching မြောက်မြားစွာနည်းလမ်းတွေသင်တစ်ဦးကြွယ်ဝသောစပါးရိတ်ရာကာလ၌စုသိမ်းကူညီပေးပါမည်။
သငျသညျကိုမြေဆီလွှာ mulching ဖြုန်းခြင်းမပြုမီ, ကဂရုတစိုက်ပြင်ဆင်ထားရန်လိုအပ်ပေသည်။ မြေဆီအပျက်အစီး၏မျက်နှာပြင်မှဖယ်ရှားရန်, ကြီးမားတဲ့ကျောက်ဆောင်, သူမ၏ propolite, ရှိသမျှပေါင်းပင်အခွင့်အလမ်းများမှာဖယ်ရှားခြင်း - အထူးသဖြင့်ရေရှည်။ အဲဒီနောကျဓာတ်မြေသြဇာရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဖြန့်ဝေ, နက်ဖြန်ခြေလှမ်းတိုက်ရိုက်ပြင်ဆင်ထားသည်မြေဆီလွှာ mulch coating ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခံရဖို့။
mulch များအတွက်ပစ္စည်း, သင်သည်မည်သည့်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ အထူးစတိုးဆိုင်များတွင်အထူးအပေါ်ယံပိုင်းရောင်းချ, ဒါပေမယ့်တခြားနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်:
sawdust နှင့်အတူ mulching သောမြေဆီလွှာ;
စသည်တို့ကို burlap, ပလပ်စတစ်ရုပ်ရှင်, ကတ်ထူပြား,
Mulch, သငျသညျမွငျနိုငျအဖြစ်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်။ အရိုးရှင်းဆုံးနှင့်အများဆုံးသုံးစွဲနိုင်လမ်း - tyapochnaya mulch ။ မြေဆီလွှာတွင်ရဟတ်ယာဉ်၏အပေါ်ဆုံးအလွှာလျော့ချလိုက်ခြင်း, သငျသညျအစိုဓာတ်ဆုံးရှုံးခြင်းနှင့်အပူထဲကနေသူတို့ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း, မြေဆီလွှာ၏အောက်ပိုင်းအလွှာကိုဖုံးသော mulch အလွှာဖန်တီးပါ။
ထိုအခါ၏ပျမ်းမျှအထူ mulching များအတွက်ပစ္စည်းပေါ် မူတည်. နှစ်ခုမှရှစ်စင်တီမီတာကနေနိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာထိုအခါနှစ်ပေါင်းများစွာမှန်မှန်ပြုသင့်ကြောင်းမှတ်မိဖို့ကအရေးကြီးတယ်။ ပထမတော့သငျသညျခကျြခငျြးတစ်ဦးအပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်မှုသတိပြုမိမပြုစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်ပြည်မှသင့်ရဲ့ကြံစည်မှုအပေါ်မြေဆီလွှာတွင်ဂုဏ်သတ္တိများ၏နှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးနှစ်လွန်ပြီးမှသိသိသာသာတိုးတက်လာသည်နှင့်အံ့သြဖွယ်အသီးကိုရောက်စေဖို့အားထုတ်မှု။
ငါရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအဘို့ arborvitae ကိုဖုံးလွှမ်းရန်ရှိပါသလား?
Kalanchoe blossfeldiana - အိမ်မှာစောင့်ရှောက်မှု, ကြီးထွားလာ Tricks
ကြက်သီး "Haynomekey နီ"
ရိတ်သိမ်းပြီးနောက် Raspberry fertilizing
ထင်းရူး - စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်စောင့်ရှောက်မှု
အချဉ်မုန့် - impregnation, အဆာများနှင့်အလှပြင်ဆင်ရေးအချိုပွဲအတွက်အကောင်းဆုံးချက်ပြုတ်နည်းများ
Tailbone နှိပ်စက်တာ - ဘာလုပ်ရမှန်း?
Stevens-Johnson က syndrome ရောဂါ
အိမ်မှာ marinated Mackerel
တိုးတက်ဘယ်တော့မှ7တီထွင်မှု
ကိုယ်ဝန် ပတ်သက်. ကောလာဟလများနှင့်ဤခေါင်းစဉ်အပေါ်ထင်ကြေးရပ်တန့်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေငြီးငွေ့ဂျနီဖာ
အစိမ်းရောင်ဘောင်းဘီတိုဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. ?
Elongated ဂျာကင်အင်္ကျီဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. ?
ကုန်ကြမ်း zucchini ၏သုပ်
ဒင်ဗာမြို့မှစကတ် - အဘယ်အရာကိုဝတ်ဆင်ရန်နှင့်မည်သို့ဖက်ရှင်ပုံရိပ်များဖန်တီးနည်း
အောင်သွယ်ပွဲစား - အကောက်ခွန်
ကလေးများ Nurofen များအတွက်ရည်အဖြစ်လုပ်ရပ်များမှတဆင့်?